Apple mere njem dị iche iche na-enye ohere iji wụnye nsụgharị ochie nke iOS | Akụkọ akụrụngwa
Apple mere njem dị egwu na-enye ohere iji wụnye nsụgharị ochie nke iOS
Apple na-eme usoro dị iche iche nke na-adịghị adị na ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụkwa maka ndị na-amaghị nke ọma na ụlọ ọrụ nke apụl bitten, ozugbo ọ malitere ụdị ngwa ngwa ọhụụ maka ndị ọrụ niile, ụdị nke gara aga na-ahapụ ndị na-egbochi ndị ọrụ. site na wụnye ihe ochie mbipute nke iOS. Iji nye otu ihe atụ, ugbu a iPhone nwere ụdị nsụgharị 11.2.2, n'ihi na iweda ya na iOS 10.3 agaghị ekwe omume n'ihi na Apple abanyeghị na mbipute ahụ, maka awa ole na ole ma anyị chere na ọ bụ n'ihi njehie iOS nsụgharị 7, 8 na 10 dị maka ọtụtụ ụdị iPhone ...
Anyị na-ekwukwa okwu n'oge gara aga n'ihi na nsụgharị ndị dị na mbụ dị maka ịbanye na ngwaọrụ ma gbochie ndị ọrụ ịwụnye nsụgharị ochie na iPhone, iPad na iPod Touch laghachiri. Mana maka ndị nwere iPhone 5 ma ọ bụ 5s ọ ka nwere ike ịwụnye iOS 7.0.3, 70.4, 7.1, 7.1.1, 8.0, 11.2, 11.xx dị ka ị pụrụ ịhụ na foto ahụ anyị hapụrụ ebe a n’okpuru.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke a na ngwaọrụ (ihe ochie ama ma n'ụzọ zuru ezu ọtọ) ị nwere ike eweda na ọbụna amaja na Jailbreak ma ọ bụrụ na ị maara otú e si eme ya ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na nke ọ bụla n'ime ndị a ochie na nsụgharị. N'ezie a nhọrọ iji wụnye ihe ochie iOS emere ya ọ kachasị iji wụnye Jalibreak, ma kpachara anya! Ma ọ bụ na site na ịwụnye ngwa ngwa ochie anyị na-ekpughe onwe anyị nye nsogbu ndị edozi na nsụgharị iOS kachasị ọhụrụ.
Nwere ike ịchọ nsụgharị ndị okenye na ndị a na-edeghị aha na ntanetị IPSW.me na n'ime ya budata ugbu a ụdị nke gara aga nke Apple binyere maka ngwaọrụ ha. Na nke a, ọ ga - ekwe omume ibudata nsụgharị iOS, mana nke a bụ ihe anyị na - akwadoghị ime ma ọ bụrụ na ị bụghị onye ọrụ dị elu nke sistemụ ahụ. Ugbu a maka iPhone 6, 6s gaa n'ihu ihe Apple binyere aka bụ: iOS 11.2.1, iOS 11.2 iOS 11.1.2.
Nke a bụ naanị mmejọ ọzọ na 2018 Nke ahụ anaghị amalite nke ọma maka Apple na ndị ọzọ na-eche na ụfọdụ ụdị nke ika ahụ nwere nsogbu siri ike na batrị, Macs nwere ụfọdụ nsogbu nchekwa na macOS na ndị ọzọ. Apple tinye batrị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Apple mere njem dị egwu na-enye ohere iji wụnye nsụgharị ochie nke iOS
Jutty Akatjutty dijo
Anaghi anabata m iphone 5s ya ..
Zaghachi Jutty Akatjutty
Orkagbọ mmiri Gorka dijo
Ma ọ bụ na site na ịwụnye ngwa ngwa ochie anyị na-ekpughe onwe anyị nye nsogbu ndị edozi na nsụgharị iOS kachasị ọhụrụ. ??
Zaghachi ụgbọ mmiri Gorka
Lee! Ugbu a enwere m iPad 4 nke dị n'anya Apple ka ọ ghara ịla n'iyi na ọ bụ ya mere na anaghị anata mmelite ọ bụla kemgbe iOS 11, ị chere na Apple ga-ewepụta ihe nchebe megide Meltdown ma ọ bụ Specter ọgụ? Ngwaọrụ ndị a na ọbụna ndị okenye dịkwa nfe !! Have na obi abụọ adịghị ya na jailbreak obodo nwere ike ime ka a kwachie nke ga-ekpuchi a vulnerability? N'ihi na Apple na-agaghị eme ihe ọ bụla na ikwu na nke a nke na-gharazie ịba uru ngwaọrụ…. ma enwere ọtụtụ !!! Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na inwere onwe gị ugwu ka ịnwere ike ịhọrọ opekata mpe ụdị IOS ị nwere ike iwunye na onye ọrụ iji kpebie ma ọ ga-achọ jailbreak ma ọ bụ na ọ chọghị, ebe ọ bụ na arụmọrụ nke ọtụtụ ngwaọrụ ndị a ga-aka mma nke ukwu.
Ruben Corral dijo
Orkagbọ mmiri Gorka N'ezie, obodo Jailbreak agaghị enwe ike ịhapụ ihe nkedo, n'ihi na ọ bụrụ na nsogbu ahụ dị na kernel ma ị nweghị koodu isi, olee otu ị ga-esi mee ya?
Zaghachi Rubén Corral
Rubén Corral na otu Apple siri mee ya na ngwaọrụ ohuru ha?
Casio bịanyere aka na smartwatches, mana n'ụzọ nke ya
Kodak weputara onye nke ya bu bitcoin onye na-egwuputa ihe